Sawirro+Warbixin:Waxsoo Saarka Beeraha Gobolka Gedo oo Meel Sare Gaaray.
Monday January 05, 2015 - 10:51:37 in Wararka by Super Admin
Intiinii horay noola socatay waxaad xalay dhegeysateen qeybta koowaad ee barnaamij tixane ah oo ka hadlaya magaalada Baardheere ee gobalka Gedo, waxaana qeybtaasu ka sheekeynaysay amniga iyo xasiloonida ay dadku haystaan.
Qeybta labaad waxaan kaga hadlaynaa dhibaatooyinkii hay’adaha shisheeye ka geysteen Baardheere iyo nawaaxigeeda, wax soo saarka beeraha ee waayadaan iyo sida odayaasha halkaas ku dhaqanu u arkaan federaalka shisheeyhu in ay Soomaaliya ka hir geliyaan ku howlan yihiin.
Dhageyso Baardheere tii aan u maleynayay ma ahan qeybta 2 aad.
Hoos Ka Daawo Sawiro Muujinaya Beeraha Baardheere.
Xasan Sheekh iyo Shariif oo sare uqaaday dagaal siyaasadeed ee ka dhan ah dowladda Farmaajo.